Iyo Yepamusoro Nyaya Dzemutemo neBlogging | Martech Zone
Iyo Yepamutemo Nyaya Dzemabhizimusi
Chipiri, July 14, 2020 Mugovera, January 2, 2021 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura, mumwe wevatengi vedu akanyora rakakura blog blog uye ivo vaitsvaga yakanaka mufananidzo yekuisa nayo. Ivo vakashandisa Google Image Kutsvaga, vakawana chifananidzo icho chaive chakamisikidzwa seyemabhizimusi-emahara, ndokuchiwedzera icho pambiru.
Mukati memazuva, vakafonerwa nekambani hombe yemifananidzo yemasheya uye vakashanda nemubhadharo wemadhora zviuru zvitatu kuti vabhadhare kushandiswa kwechifananidzo uye vadzivise nyaya dzepamutemo dzakanangana nekumhan'arirwa kutyorwa kwekodzero. Ndiyo nyaya iyo yakatifambisa kunyorera DepositPhotos yemifananidzo isingadhuri uye yemhando yepamusoro yemahara.
Kunyangwe iwe uri bhizimusi rine blog kana, ingova neyako blog, nyaya hadzichinje. Ehezve, pamwe nekambani blog iwe unogona kubheja kuti kushingairira kwekutonga kunogona kunge kuri kuita hasha zvakanyanya uye zvirango zvinotodzikama. Idzo dzepamusoro dze3 dzepamutemo uye netsaona mabloggi anomhanyira mairi ndeaya:
Copyright Kukanganisa - kushandiswa kwemabasa akachengetedzwa nemutemo wekopisiti pasina mvumo, achityora dzimwe kodzero dzakasarudzika dzakapihwa kumunhu ane kodzero, senge kodzero yekuberekesa, kugovera, kuratidza kana kuita basa rakachengetedzwa, kana kuita mamwe mabasa.
Kusvibiswa - kutaurirana kwechirevo chenhema chinokuvadza mukurumbira wemunhu, bhizinesi, chigadzirwa, boka, hurumende, chitendero, kana nyika. Kuumba kusvibisa, chikumbiro chinofanirwa kuve chenhema uye chakaitwa kune mumwe munhu asiri iye akasvibiswa.
KUKONZESA-SPAM kutyorwa - CAN-SPAM ndiyo mitemo yeUnited States inovhara mameseji ekutengesa emaimeri. Kuita zvechisimba kunogona kuita mari inosvika madhora zviuru gumi nezvitanhatu! Verenga: Ndeupi mutemo weCAN-SPAM?
Izvi infographic, Blog Mutemo 101, kubva kuMonder Law Group zvinyorwa izvi epamutemo epamutemo uye nenyaya dzezvikwereti inosanganisirwa nekublogi pamwe nemabatirwo avangaitwa.
Kuzivisa: Tiri kushandisa yedu yakabatana link ye DepositPhotos mune ino posvo.
Tags: Bloggingblogging zvemutemocan-spamkopi kukanganisakusvibiswadmcamutemozviri pamutemomutorospam
Chii chinonzi VPN? Unosarudza Sei Imwe?
Jul 15, 2016 na1: 56 PM
Ndatenda nechinyorwa ichi! Yakanyanya kubatsira uye neruzivo ruzivo kune avo vanoronga kutanga kublogi, uye kwete chete. Kana ndiri ini, zvakakosha kuti uzive mitemo kunyangwe hazvo nzvimbo yacho iri nyowani kwauri ('Ignorantia non est argumentum')